လေးစားစရာကောင်းတဲ့ မြန်မာထဲက တကယ့်မြန်မာTaxi Driver - Focus Myanmar
လေးစားစရာကောင်းတဲ့ မြန်မာထဲက တကယ့်မြန်မာTaxi Driver
May 18, 2019 By Myanamr Plus in ဆောင်းပါ။ Tags: မြန်မာ
မင်္ဂလာရှိသောနေ့ကလေးတစ်နေ့ပါဘဲ …ဒီနေ့ Taxi ထွက်ဆွဲတာ.မြို့ထဲ 13 လမ်းထိပ်ကနေလေဆိပ်ကိုနိုင်ငံခြားသား/သူနှစ်ယောက် ကားငှါးတာ လိုက်ပို့တယ်ဆိုပါတော့ဗျာ …
သူတို့ကိုပို့ပြီးတော့ နောက်ခရီးသည်တစ်ဦး ရတော့ အင်းစိန်ပေါက်တောဝနားက မုဒိတာအိမ်ရာကို လိုက်ပို့ တာ စီးလာတဲ့အမျိုးသမီးက ရှေ့ကဘယ်သူစီးသွားလဲတဲ့ …
ဘာဖြစ်လို့လဲအစ်မလို့မေးတော့ဒီအနောက်မှာ အိတ်တစ်အိတ်ကျန်ခဲ့တယ်တဲ့ ကျွန်တော်လည်းသိလိုက်တယ်.နိုင်ငံခြားသားကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတာ. အဲဒီအိတ်ကို ခရီးသည်အစ်မရှေ့မှာဘဲ စစ် ကြည့်လိုက်တယ်.
Canon အမျိုးအစားCamera တစ်လုံးနဲ့ နိုင်ငံခြားငွေထုတ်ကဒ်နှစ်ကဒ်ကိုတွေ့လိုက်တယ် ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် အရေးမကြီးဘူးထင်ရပေမယ့် Camera ထဲကမှတ်တမ်းတွေကအရေးကြီးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်လိုက်တယ်….
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သဘာဝအလှအပရှုခင်း တွေက ဒီCamera ထဲမှာလေ …သူတို့ ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုအလည်လာဖို့ ဘယ်လောက်ရင်းနှီးခဲ့ရမလဲ. …နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက Taxi သမားတွေရဲ့ ရိုးသားတဲ့စိတ်ဓါတ်ကိုပြရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်လိုက်တယ် …
ခရီးသည်အမျိုးသမီးကိုပို့ ပြီးပြီးချင်းအမြန်ဆုံးလမ်းကနေ မောင်းပြီး လေဆိပ်ကိုမောင်းလာတာ ထင်တဲ့အတိုင်းဘဲနိုင်ငံခြားသား/သူနှစ်ယောက် ပစ္စည်းကျန်ခဲ့လို့ ဒေါင်း တောက်နေတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ …ကျွန်တော်လည်းတွေ့ပြီး ပစ္စည်းပြန်ပေးလိုက်တာဝမ်းသာအားရဖြစ်နေတဲ့ ပုံကိုကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်မိရပါတယ်ဗျာ…
မုဒိတာအိမ်ရာကို ငှါးစီးတဲ့အစ်မကိုလည်း ကျေးဇူးအများ ကြီးတင်ပါတယ်.သူလည်းရိုးသားလို့ပေါ့.သူလည်းမပြော ဘဲ ယူသွားရင် ကျွန်တော်လည်းဒုက္ခပါဘဲ …ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံက Taxi သမားတွေရဲ့ရိုးသားတဲ့စိတ်ဓါတ်ကို ပြသရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်…
Credit – Zaw Shein
လေးစားစရာကောငျးတဲ့ မွနျမာထဲက တကယျ့မွနျမာTaxi Driver
မင်ျဂလာရှိသောနကေ့လေးတဈနပေ့ါဘဲ …ဒီနေ့ Taxi ထှကျဆှဲတာ.မွို့ထဲ 13 လမျးထိပျကနလေဆေိပျကိုနိုငျငံခွားသား/သူနှဈယောကျ ကားငှါးတာ လိုကျပို့တယျဆိုပါတော့ဗြာ …
သူတို့ကိုပို့ပွီးတော့ နောကျခရီးသညျတဈဦး ရတော့ အငျးစိနျပေါကျတောဝနားက မုဒိတာအိမျရာကို လိုကျပို့ တာ စီးလာတဲ့အမြိုးသမီးက ရှကေ့ဘယျသူစီးသှားလဲတဲ့ …
ဘာဖွဈလို့လဲအဈမလို့မေးတော့ဒီအနောကျမှာ အိတျတဈအိတျကနျြခဲ့တယျတဲ့ ကြှနျတျောလညျးသိလိုကျတယျ.နိုငျငံခွားသားကနျြခဲ့တယျဆိုတာ. အဲဒီအိတျကို ခရီးသညျအဈမရှမှေ့ာဘဲ စဈ ကွညျ့လိုကျတယျ.
Canon အမြိုးအစားCamera တဈလုံးနဲ့ နိုငျငံခွားငှထေုတျကဒျနှဈကဒျကိုတှလေို့ကျတယျ ပွနျစဉျးစားကွညျ့ရငျ အရေးမကွီးဘူးထငျရပမေယျ့ Camera ထဲကမှတျတမျးတှကေအရေးကွီးမယျဆိုတာကြှနျတျောနားလညျလိုကျတယျ….
ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့မွနျမာနိုငျငံရဲ့ သဘာဝအလှအပရှုခငျး တှကေ ဒီCamera ထဲမှာလေ …သူတို့ ဒီမွနျမာနိုငျငံကိုအလညျလာဖို့ ဘယျလောကျရငျးနှီးခဲ့ရမလဲ. …နောကျပွီးတော့ ကြှနျတျောတို့ မွနျမာနိုငျငံက Taxi သမားတှရေဲ့ ရိုးသားတဲ့စိတျဓါတျကိုပွရမယျဆိုတာကြှနျတျောနားလညျလိုကျတယျ …
ခရီးသညျအမြိုးသမီးကိုပို့ ပွီးပွီးခငျြးအမွနျဆုံးလမျးကနေ မောငျးပွီး လဆေိပျကိုမောငျးလာတာ ထငျတဲ့အတိုငျးဘဲနိုငျငံခွားသား/သူနှဈယောကျ ပစ်စညျးကနျြခဲ့လို့ ဒေါငျး တောကျနတေဲ့ပုံစံတှနေဲ့ …ကြှနျတျောလညျးတှပွေီ့း ပစ်စညျးပွနျပေးလိုကျတာဝမျးသာအားရဖွဈနတေဲ့ ပုံကိုကွညျ့ပွီး ပီတိဖွဈမိရပါတယျဗြာ…
မုဒိတာအိမျရာကို ငှါးစီးတဲ့အဈမကိုလညျး ကြေးဇူးအမြား ကွီးတငျပါတယျ.သူလညျးရိုးသားလို့ပေါ့.သူလညျးမပွော ဘဲ ယူသှားရငျ ကြှနျတျောလညျးဒုက်ခပါဘဲ …ဘာပဲဖွဈဖွဈမွနျမာနိုငျငံက Taxi သမားတှရေဲ့ရိုးသားတဲ့စိတျဓါတျကို ပွသရတဲ့အတှကျဂုဏျယူမိပါတယျ…